जलविद्युत्को ‘हब’ बन्दै मोदी गाउँपालिका | गृहपृष्ठ
Home विकास जलविद्युत्को ‘हब’ बन्दै मोदी गाउँपालिका
on: March 21, 2018 विकास
पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिका जलविद्युत् आयोजनाको ‘हब’ बन्दै गएको छ । २०५३ सालदेखि मोदीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रम शुरू भएको थियो । अहिलेसम्म यहाँ सञ्चालित, निर्माणाधीन र निर्माणको प्रक्रियामा रहेका गरी जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या ७ पुगेको छ । बाह्रैमास खोलामा पानीको बहाव समान हुने भएकोले मोदीखोलामा विद्युत् आयोजना बनाउन लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् ।
पोखरा–बागलुङ राजमार्ग बनेपछि मोदीखोलामा विद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको थियो । हाल यो खोलामा बनेका दुई आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । दुईओटा आयोजना निर्माणाधीन छन् भने तीनओटा आयोजनाले निर्माणको अनुमति पाएर कार्ययोजना तयार पारेका छन् ।
सरकार र निजीक्षेत्रको लगानीमा यहाँ जलविद्युत् आयोजना थपिएका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०५३ सालदेखि निर्माण थालेको १४ मेगावाटको मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाले २०५९ देखि उत्पादन शुरू गरेको थियो । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले युनाइटेड मोदी–१ आयोजनाबाट २०६९ देखि १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।
अहिले तल्लो मोदी २० मेगावाट र १५ दशमलव १ मेगावाटको आयोजना निर्माणाधीन छन् । मोदीखोलामै पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत दुई र युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीमार्फत तीनओटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् ।
प्राधिकरणले ४२ मेगावाटको अपर मोदी ‘ए’ र १८ दशमलव २ मेगावाटको अपर मोदी आयोजनाको निर्माण थालेको छ । युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले साढे १० मेगावाटको युनाइटेड मोदी–२ निर्माण थाल्न अघिल्लो वर्ष सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाएको थियो ।
प्राधिकरणले ४२ मेगावाटको अपर मोदी ‘ए’ र १८ दशमलव २ मेगावाटको अपर मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढाएको छ । ‘दुवै आयोजनाको डिजाइन स्वीस कम्पनी एएफ कन्सल्टलाई दिइसकिएको छ,’ आयोजना प्रमुख सञ्जीवमान राजभण्डारीले भने, ‘१० महीनाभित्र डीपीआर आउँछ । त्यसलगत्तै काम शुरू हुन्छ ।’ दुवै आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन यसअघि भइसकेको उनले बताए । अपर मोदी ‘ए’ बाट निस्केको पानी सीधै अपर मोदीमा पठाएर दुई आयोजना सँगै निर्माण गर्न प्राधिकरण अग्रसर भएको छ ।
सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन र निर्माणको चरणमा रहेका सात जलविद्युत् आयोजनाबाट १ सय ३० मेगावाट जलविद्युत् निर्माण हुने भएको छ । हाल सञ्चालित मोदीखोला र युनाइटेड मोदीबाट २४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । मनाङ ट्रेड लिङ्कले निर्माण गरिरहेको तल्लो मोदी आयोजना २० मेगावाटको छ । आयोजनाबाट यही चैतभित्र उत्पादन दिनेगरी काम भइरहेको आयोजना प्रमुख पवनकुमार यादवले बताए । चौधरी ग्रूपले निर्माण गर्न लागेको मध्य मोदीको क्षमता १५ दशमलव १ मेगावाट छ । २०७१ मङ्सिरबाट निर्माण शुरू उक्त आयोजनाको आधाजसो काम सकिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय चर्चामा आएका अपर मोदी ‘ए’ र अपर मोदीको क्षमता ४२ र १८ दशमलव २ मेगावाट छ । दुवै आयोजना प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको हो । यी आयोजनाको १० महीनाभित्र डीपीआर तयार भई निर्माण शुरू हुने प्राधिकरणले बताएको छ ।
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गर्ने युनाइटेड मोदी–२ को क्षमता साढे १० मेगावाटको छ । निर्माणाधीन दुवै आयोजनाले आगामी २ वर्षभित्र उत्पादन दिनेछन् । निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन सबै आयोजनाको उत्पादन जोड्दा १ सय २९ दशमलव ८ मेगावाट पुग्छ, जुन हाल मुलुकभरमा माग हुने विद्युत्को करीब १० प्रतिशत हो । मोदीखोलामै निर्माणाधीन १५ दशमलव १ मेगावाटको मध्यमोदी आयोजनाको लागत अनुमान रू. ३ अर्ब छ । चौधरी ग्रूपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले २०७१ मङ्सिरमा शिलान्यास गरेको उक्त आयोजनामा प्रतिमेगावाट १९ करोड ८६ लाख अनुमान गरिए पनि हाल त्यसको लागत बढ्ने अनुमान छ ।
निर्माण सम्पन्न भएका, निर्माणाधीन र निर्माण हुने चरणमा रहेका सबै आयोजनाको समग्र हिसाब गर्दा मोदीखोलामा मात्रै जलविद्युत्मा कम्तीमा रू. २६ अर्ब लगानी हुने देखिएको छ । उत्पादन भएको विद्युत् विक्री गरेर बढीमा ५ वर्षमा आयोजनामा हुने लगानी उठाउन सकिने निर्माण कम्पनीको अनुभव छ ।
पर्वतमा निर्माण सम्पन्न १४ मेगावाटको मोदीखोला र १० मेगावाटको युनाइटेड मोदी–१ आयोजनाबाट यसअघि तत्कालीन जिविसले वर्षेनि करीब ४ करोड विद्युत् रोयल्टी प्राप्त गर्दै आएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमै छ । मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम शर्मा पौडेलका अनुसार हाल सञ्चालित दुई आयोजनाको २४ मेगावाट क्षमताका विद्युत्बाट यो वर्ष मोदी गाउँपालिकाले करीब ५० लाख रोयल्टी पाउने अनुमान छ ।